जाडोमा मोबाइल चलाउँदा ध्यान दिनुहोस् यी विषय, नत्र 'बिरामी' हुनसक्छ तपाईँको मोबाइल - Technology Khabar
» ताजा समाचार » जाडोमा मोबाइल चलाउँदा ध्यान दिनुहोस् यी विषय, नत्र ‘बिरामी’ हुनसक्छ तपाईँको मोबाइल
Technology Khabar ७ माघ २०७८, शुक्रबार
हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र घाम नलाग्दा तराईको तापक्रममा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको छ। चिसोका कारण मानिसहरु समस्यामा परेका छन् । जाडोबाट बच्न र शरीरलाई स्वस्थ राख्न मानिसहरु धेरै ख्याल गर्ने गर्छन् तर यी सबैको बिच अहिको समयमा मानिसहरु आफूसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिदैनन् ।
हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा मोबाइल हो। वास्तवमा, चिसोको प्रभावले तपाईको मोबाइलको स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ। अर्थात् जाडोमा मोबाइलको ख्याल गरिएन भने त्यसमा पनि धेरै समस्या आउन सक्छ।
आउनुहोस् हामी तपाईलाई केही सरल उपाय बताउछौं, जसलाई अपनाएमा तपाईको मोबाइल चिसोमा फिट रहनेछ।
कस्ता समस्या आउँछन् ?
१. ब्याट्रीमा प्रभाव
विज्ञहरूका अनुसार जबसम्म तापक्रम शुन्य डिग्री सेल्सियस हुन्छ, त्यसबेलासम्म तपाईको फोनले राम्रोसँग काम गर्छ। उही समयमा, जब तापमान माइनस तर्फ पुग्छ, स्मार्टफोनको ब्याट्री ड्रेन हुनथाल्छ। तापक्रम घट्दै जाँदा तपाईको स्मार्टफोनको ब्याट्री पनि कम हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार धेरैजसो फोनमा लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिन्छ। जब तापक्रम खस्छ, तिनीहरूको आन्तरिक विद्युतीय प्रतिरोध बढ्छ। जसका कारण ब्याट्रीको क्षमता घट्न थाल्छ।
२. स्क्रिनमा पनि समस्या
जाडोमा मोबाइलको स्क्रिनमा धेरै समस्या आउने गर्छ। वास्तवमा, जब तापक्रम घट्छ, फोनको स्क्रिन धमिलो हुन थाल्छ वा त्यसमा चिसो पानी टाँसिएको जस्तो हुन्छ। जसका कारण फोनमा देखिने टेक्स्ट र तस्विर पनि स्पष्ट देखिँदैन।
३. स्पीकरको लागि समस्या
जाडोमा कुहिरो लाग्नु सामान्य कुरा हुन्छ। कुहिरोमा कतै घरबाट बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ र अचानक कसैको फोन आयो भने त्यो समयमा धेरै बेर कुरा गर्दा पनि फोनका लागि खतरा हुन्छ। वास्तवमा, यस समयमा शीतको कारण, तपाईंको फोनको स्पिकरमा क्षतिग्रस्त हुन सक्छ।
के सावधानी अपनाउने ?
जाडोमा मोबाइललाई माथि उल्लेखित समस्याहरुबाट टाढै राख्न चाहनुहुन्छ भने यी उपाय अपनाउनु पर्छः-
चिसो मौसममा आफ्नो फोन लामो समयसम्म बाहिरी वातावरणमा नछोड्नुहोस्।
यदि तपाइँ फोनलाई राम्रोसँग राख्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई न्यानो ज्याकेटमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यसबाहेक, तपाईले फोनलाई राम्रो कभरमा हालेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यसले फोनको तापक्रम ठीक राख्छ।
यदि तपाईं लामो यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो फोनलाई पावर बैंकमा कनेक्ट गर्नुहोस्।
फोन खल्तीमा राख्दा बढी फाइदा हुन्छ। तपाईले फोनमा राम्रो कभर पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
कुहिरो लागेको वा आद्रता भएको ठाउँमा लामो समयसम्म फोन नउठाउनुहोस्। जसका कारण फोनमा आर्द्रता आउन थाल्छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७८, शुक्रबार
तपाईँको स्मार्टफोनमा यदि यी संकेतहरू देखिए भने, बुझ्नुहोस् तपाईँको फोन ह्याक गरिएको छ